खाना समय अनुसार खाने कि भोक लागेपछि मात्र ? जानौं फाईदा र बेफाईदा - ज्ञानविज्ञान
हामिले अरु थप केहि जानकारीहरु यहाँ पस्केका छाैँ ।
हामीले खानेकुरा पकाउँदा त्यसको पोषक तत्व कसरी सुरक्षित राख्ने ?
कति खानेकुरा पकाएर खाइन्छ, कतिपय काँचो खाइन्छ ।
चामलमा पाइने पोषक तत्वहरु के के हुन् ? याे पनि जानिराखाैँ
हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने खान हो चामल जुन मानव जीवनको लागिको लागि नभइ नहुने बस्तु हो । हामी नेपालीहरुको मुख्य आहारा भनेको नै चामल हो । तर हामीलाई थाहा नहुन सक्छ चामलको फाइदाहरु आथवा चामलमा के के पाइन्छ भनेर ?
यो चामलमा पाइने एक खनिज हो, यसको सिधा सम्बन्ध हाम्रो प्रजनन क्षमतामा पर्छ । यसैले चामलको उपयोग गर्नाले प्रजनन क्षमताका लागि पनि लाभदायी हुन्छ ।
चामलमा पाइने पोषकतत्वमा आइरन तत्व पनि हो । यसले शरीरलाई स्वस्थबद्र्धक बनाउन मद्धत गर्छ ।
आयुर्वेदमा चामलको स्थान
आयुर्वेदमा चामलको स्थान महत्वपूर्ण छ । आयुर्वेदमा चामललाई पेट ठन्डा राख्ने खाद्यपदार्थको रुपमा लिइन्छ ।
चामलमा पाइने फाइबरले हाम्रो शरीरका आवश्यकता पूरा गर्छ । फाइबरले पेटमा हुने विषाक्त पदार्थलाई नष्ट गर्छ, जसल क्यान्सरको सम्भावना कम हुन्छ ।
चामलमा भिटामिन बी पनि पाइन्छ, जसले डिमेन्सिया र अल्जाइमर रोग रोक्न शरीरलाई मद्धत गर्छ ।
Don't Miss it औषधिकाे प्रयोग गर्दा हामीले यस्ता कुराहरुमा ध्यान दिन अत्यन्तै जरुरी हुन्छ, एकचाेटि पढाैँ
Up Next मधुमेहका रोगी देखि लिएर अन्य थुप्रै रोगीलाई लाभकारी हरियो मकै जानकारी लिनुहाेस्
स्तनपान गराउने आमाहरुले जान्नै पर्ने केहि कुराहरु
आमाको दुध बच्चाका लागि त्यस्तो पोषण हो, जसले उनीहरुको शरीरिक-मानसिक विकासका लागि अपरिहार्य हुन्छ । बच्चाका आमाले बच्चा लाई आफ्नो…